James Mal's 'Malignant' dia ho tonga any Blu-Ray amin'ity volana novambra ity - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ho avy any Blu-Ray i James Wan's 'Malignant' amin'ity volana novambra ity
Ho avy any Blu-Ray i James Wan's 'Malignant' amin'ity volana novambra ity
Malignant dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra amin'ny taona
by Trey Hilburn III Oktobra 18, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 18, 2021 245 hevitra
Ny adala nataon'i James Wan, giallo throwback dia iray amin'ireo zavatra tianay indrindra tamin'ny taona. Nisy famotsorana HBO Max tamin'ny volana septambra teo. Indray mandeha, namely izany, tsy maintsy nijerijery azy in-6 na in-7 aho mba hahazoana ny voky. Ny mistery famonoana bonkers dia vahindanitra ivelan'ny boaty. Vaovao tsara ho an'ny namana mamohehatra ry mpitia, tonga amin'ny blu-ray izy amin'ny volana novambra.
Ny synopsis ho an'ny mamohehatra mandeha toy izao:
Malemy noho ny tahotra noho ny fahitana manafintohina, miharatsy ny fampijaliana vehivavy rehefa mahita ny nofinofiny mifoha dia zava-misy mampatahotra.
Voasarona manify tokoa ny synopsis. Ilay famaritana malemy dia mamela toerana be dia be mba ho taitra tanteraka amin'ilay zavatra rehetra. Izay, matokia ahy ianao fa hanana tsy ampoizina maro mandritra ity famantaranandro ity.
Ny hany bummer lehibe dia ity blu-ray ity dia tsy dia manana fiasa manokana. Mampalahelo fa manana featurety kely any ambadiky ny sehatra ihany io. Ity karazana sarimihetsika ity dia tokony hilentika lalina amin'ny famotsorana azy. Noho izany, misy zavatra milaza amiko fa hanana famoahana fanontana manokana an'ilay horonantsary izahay.
Mandritra ny fotoana tsy fantatrao tsara, dia haka dika mitovy amin'ity famotsorana ity aho. Mba hialana amin'ny lohanao ny pre-order anao ETO.
mamohehatra mikapoka talantalana manomboka ny 30 Novambra.
Jereo ny Cateories Select Category4K UHD (19)Amazon (sarimihetsika) (11)Amazon (andiany) (12)AppleTV + (6)Blu Rays (41)Box Office (1)Horohoro amin'ny hatsikana (51)Tantara an-tsary (16)Zavatra tsara hividianana (57)Cool Stuff tokony hatao (9)Krismasy mampatahotra (2)Disney+ (série) (1)Editorial (1)Vaovao momba ny fialamboly (18)Facebook (andiany) (1)Angano (49)Rakitra hita (28)Mampihomehy (1)Lalao (221)Gore (26)Halloween (3)Haunts (6)HBO (andiany) (9)Boky mahatsiravina (69)Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (11,382)Horror Series (159)Subgenres mahatsiravina (18)Hulu (andiany) (7)Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (49)Resadresaka nifanaovana (andiany) (6)Horohoro LGBTQ (43)Lisitry (sarimihetsika) (46)Lisitry (andiany) (2)Tsena (22)Monster Horror (11)Sarimihetsika (3)Hevitra momba ny sarimihetsika (92)Sarimihetsika (527)Mozika (44)Netflix (sarimihetsika) (39)Netflix (andiany) (65)Tsy angano (5)Paranormal (78)Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (55)Sci-Fi (2)Andiany (1)Famerenana andian-dahatsoratra (10)Sarimihetsika fohy (2)Fotoana fampisehoana (andian-dahatsoratra) (1)Shudder (sarimihetsika) (61)Shudder (andiany) (20)Slasher (6)Hafahafa sy tsy mahazatra (42)Streaming Series (51)Streaming Series (2)Kilalao (8)Tranofiara (3)Trailer (lalao) (1)Tranofiara (sarimihetsika) (391)Tranofiara (andiany) (51)Heloka tena izy (51)TV (8)VOD (1)VR (1)YouTube (2)YouTube (sarimihetsika) (5)YouTube (andiany) (13)Zombies (1)
Sundance 2022: Mitondra Herisetra sy Ambiguity ara-moraly ny 'Piggy'...